Will Smith ayaa iska casilaya Akademiyada ee Maraykanka - Jowhar somali news leader
By hanad	 On Apr 2, 2022
April 02 (Jowhar.com) – Will Smith ayaa Jimcihii iska casilay shaqada Akademiyada Sawirada Motion Pictures ka dib markii uu Chris Rock dharbaaxo dhabeenka ah ku garaacay Oscars wuxuuna sheegay inuu aqbali doono ciqaab kasta oo uu soo rogo ururka.
Smith ayaa bayaan uu soo saaray galabnimadii jimcaha ku sheegay in uu si buuxda u aqbali doono wax kasta iyo dhammaan cawaaqibka ka dhalan kara habdhaqankayga. Ficiladaydii Abaalmarinnada Akadeemiyada 94-aad waxay ahaayeen kuwo naxdin leh, xanuun badan oo aan la cafin karin.”
Madaxa Akadeemiyada Filimada David Rubin ayaa sheegay in iscasilaada Smith la aqbalay. “Waan sii wadi doonaa inaan sii wadno tallabadayada anshax-marinta ee ka dhanka ah Mr. Smith ku xad gudubka heerarka anshaxa Akadeemiyada, ka hor kulanka soo socda ee Guddiga ee loo qorsheeyay Abriil 18.”
Smith wuxuu luminayaa mudnaanta codbixinta markuu iscasilo. Laakiin waxaa jira faa’iidooyin kale oo yar oo dhab ah oo ku jira qayb ka mid ah Akademiyada, taas oo ah ururka ugu caansan Hollywood: Waxay siisaa kalsoonida warshadaha xubnaheeda. Waa martiqaad kaliya, iyo dib u eegista xubinnimada sannadkii hal mar.
“Waxaad khiyaanaysay kalsoonida Akadeemiyada. Waxaad u diiday xubnaha la magacaabay iyo kuwa kale ee ku guulaystey fursad ay ku dabaaldegaan oo ay ugu dabaaldegaan shaqadooda gaarka ah.” “Qalbigaygu wuu gubanayaa. Waxaan rabaa inaan diirada saaro kuwa mudan in fiiro gaar ah loo yeesho wax qabadkooda oo aan u ogolaado Akademiyada inay ku soo noqoto shaqada cajiibka ah ee ay ku taageerto hal-abuurka iyo fanka shineemada.
“Isbeddelku wuxuu qaataa waqti, waxaana iga go’an inaan qabto shaqada si aan u hubiyo in rabshadaha aan mar dambe loo oggolaan inay ka sii daraan sababta,” Smith ayaa ku soo gabagabeeyay bayaanka.
Iscasilaada ayaa timid laba maalmood ka dib markii ay kulmeen guddiga hogaanka akadeemiyada si ay u bilaabaan dacwado anshaxeed oo ka dhan ah Smith ku xad-gudbida heerarka anshaxa kooxda. Falalkan ayaa keeni kara in shaqada laga joojiyo ama laga saaro, lamana oga ilaa hadda ciqaabta dheeriga ah ee uu la kulmi karo.
Haddii isaga la eryi lahaa, Smith waxa uu ku biiri lahaa koox yar oo rag ah oo laga tuuray akadeemiyadda: Harvey Weinstein, Roman Polanski, Bill Cosby, iyo atariishada Carmine Caridi, kuwaas oo lagu eryay ka qaybgalka abaalmarinta bandhigga.
Axadii, Smith wuxuu ka soo lugeeyay kursigiisii ​​safka hore ee Dolby Theatre ilaa masraxa wuxuuna dharbaaxay Rock, kaasoo kaftan ku sameeyay qarashka xaaska Smith, Jada Pinkett Smith. Daqiiqado ka dib, wuxuu ku guuleystay Jilaaga ugu Fiican doorkiisii ​​King Richard.
Rock, oo qarka u fuulay inuu soo gudbiyo abaalmarinta Oscar for Best Documentary Feature, ayaa diiday inuu dacwad ku soo oogo markii ay booliisku waydiiyeen. Waxa uu si kooban uga hadlay weerarka meel fagaare ah, isaga oo ka sheegay xaflad majaajillo ah oo ka dhacday Boston toddobaadkan in uu weli “nooca habaynayo wixii dhacay.”
Smith Rock ayaa ka yaabiyay daawadayaasha masraxa iyo daawadayaasha guriga markii uu soo qaaday masraxa ka dib markii Rock uu si kaftan ah u yiri, “Jada, waan ku jeclahay.” GI Jane 2 “Ma sugi karo inaan arko iyada.”
Pinkett Smith, oo si cad uga hadashay xaaladeeda timaheeda, alopecia, ayaa si buuxda u xiirtay madax la mid ah madaxa Demi Moore ee filimka asalka ah.
Weerarkii Smith ka dib, wuxuu ku soo noqday kursigiisii ​​wuxuuna si caro leh laba jeer ugu qayliyay Rock “si magaca xaaskayga looga saaro afkaaga (wax macquul ah)”. Markii Smith uu mar kale masraxa qaatay wax ka yar saacad ka dib si uu u aqbalo Abaalmarintiisa Akadeemiyada, waxa uu si ilmeyn leh u raali galiyay Akadeemiyada laakiin waxa uu si gaar ah uga saaray wax kasta oo ku saabsan muusiga dhagaxa.
Dhibaatadu waxay ahayd mid degdeg ah oo daran. Smith waxa uu lahaa taageereyaal si uu u difaaco xaaskiisa, laakiin waxa si weyn loogu cambaareeyay in uu ku jawaabay rabshado iyo guurkiisa oo uu ku guuleystay Oscar-ka oo aad loo sugayay oo uu hadheeyay kuwii kale ee ku guuleystay habeenkii.
Macron warns of the risks of extremism in an electoral rally as opinion polls tighten in France
Pakistan’s absolute prime minister Imran Khan faces a vote of no-confidence